Etu esi ezo IP na gam akporo | Androidsis
Na -agaghị atụnyere ọha mmadụ ugbu a na nke George Orwell kọwara n'akwụkwọ ya 1984, oge ọ bụla anyị nọ na -achịkwa nke ọma n'ihi ojiji ịntanetị anyị. Na -enweghị ịntanetị, ọ ga -esiri gị ike karị soro ọrụ ụmụ amaala, ọrụ na -ahapụkarị akara site na IP.
IP nke anyị ji achọgharị ịntanetị dị ka efere ikike anyị, efere akara ụwa niile na -atụ anyị aka mgbe niile. Enweghị IP abụọ bụ otu na ụwa. Onye ọrụ ọ bụla nwere IP, IP jikọtara ya na ISP (onye na -eweta ịntanetị) yana onye na -echekwa ndekọ ọrụ anyị niile site na ịntanetị.
Iji gbochie ISP anyị ịmara oge niile ibe weebụ anyị gara, nke anyị na -ebudata na ịntanetị na ihe ndị ọzọ, naanị ihe ga -eme bụ izobe IP. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otu esi ezo IP na gam akporoN'okpuru, anyị na -egosi gị nhọrọ niile enwere ike, ma n'efu ma akwụ ụgwọ.
1 Jiri VPN
1.1 Ọ bụghị VPN niile bụ otu
2 Jiri onye nnọchiteanya
4 Jiri Wi-Fi ọha
5 Emela mgbagwoju anya izo IP na ihe nchọgharị incognito
Ozugbo anyị matara ihe IP bụ, anyị ga -ekwu maka ọrụ VPN. Ọrụ ndị a na -emepụta netwọọdụ nzuzo nkeonwe (VPN maka ndebiri ya n'asụsụ Bekee) n'etiti akụrụngwa anyị na sava ya, yabụ ISP anyị amaghị ihe anyị na -eji njikọ ịntanetị ha, na ọ nweghị ike soro ọrụ anyị niile.
Na mgbakwunye, ọdịnaya niile anyị zitere ma nata na VPN anyị, na -ezoro ezo, yabụ na onweghị onye ga -enwe ike ịnweta ọdịnaya gị ma ọ bụrụ na ijikwa jidesie ya ike, n'agbanyeghị na ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ oge efu (afọ) ị ga -enwe ike imebi ya n'otu oge.
Ọzọkwa, mgbe ị na -eji ọrụ VPN, anyị agaghị eji IP mbụ anyị eme njemKama, anyị ga -eji IP sitere na obodo nke anyị họrọburu. Nke a bụ otu njirimara nke ọrụ ndị a, ebe ọ bụ na mgbakwunye na izobe egwu anyị, ha na -enye anyị ohere ịnweta ọdịnaya amachibidoro mpaghara.
Ọ bụghị VPN niile bụ otu
VPN akwụ ụgwọ echekwala ndekọ ọ bụla nke nchọgharị anyịYabụ, ọ nweghị gọọmentị ma ọ bụ ndị uwe ojii nwere ike ịrịọ ndekọ nchọgharị iji nyochaa ihe anyị na -eme na njikọ ịntanetị anyị.
Agbanyeghị, ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịchọta VPN akwụ ụgwọ, mana enwerekwa ndị nweere onwe ha. Ikpo okwu ndị a ga -ebi ndụ. A na -enweta isi mmalite nke ego zụọ ahịa na data nchọgharị anyị ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, nyocha ...
Mgbe ị na -ahọrọ VPN ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgagharị na -enweghị aha yana na echekwara data anyị n'ụdị ndekọ ọ bụla anyị ga -ahọrọ usoro ịkwụ ụgwọ. Ụfọdụ VPN ndị ama ama bụ NordVPN, TunnelBear, ExpressVPN, Surfshark ...
Naanị ndọghachi azụ anyị na -eche ihu mgbe anyị na -eji VPN bụ nke ahụ ha anaghị enye anyị otu ọsọ ọsọ na anyị nwere ike ịme nchọgharị ozugbo na njikọ anyị na -enweghị ụdị nchebe ọ bụla, yabụ anyị ga -eburu n'uche nke a mgbe ị na -ahọrọ VPN nke na -enye anyị ọsọ kacha elu.
Jiri onye nnọchiteanya
Onye nnọchiteanya bụ kọmpụta nke na -eme dị ka onye na -emechi n'etiti njikọ onye ahịa (U.S) na ihe nkesa. N'ụzọ dị otú a, anyị na -eji IP nke onye nnọchiteanya, ọ bụghị nke ndị otu anyị.
Ọ bụrụ na ọ bụ onye nnọchi anya ụlọ ọrụ nke kọmputa niile na -ejikọ na ịntanetị, O siri ike ịmata kọmputa nke IP ahụ kwekọrọ ọ gwụla ma onye nchịkwa ji mmemme na -edekọ nkwukọrịta kọmputa niile.
Tor Browser bụ ihe nchọgharị eji eme ihe banye na Web Ọchịchịrị, ka a ghara inwe mgbagwoju anya na Web Weebụ. Ihe nchọgharị a na -ejikọ na sava Tor Project wee nye ohere chọgharịa n’aha na-enweghị aha na -eji IP dị iche na nke anyị.
Ọ na -arụ ọrụ n'otu aka ahụ na VPN, mana n'adịghị ka ndị a, anyị enweghị ike ịhọrọ obodo ebe anyị chọrọ ijikọ. Na mgbakwunye, ọsọ nchọgharị ọ na -eji nwayọ karịa ọsọ njikọ anyị nwere ike nweta, jiri nwayọ karịa ka anyị nwere ike ịhụ ya na VPNs.
Nke kachasị mma bụ na ọ bụ kpam kpam free ọ chọghịkwa ịkwụ ụgwọ ọ bụla iji nwee ike iji ya mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Na mgbakwunye, ọ na -etinye sistemụ na -egbochi webụ soro anyị na onye na -egbochi mgbasa ozi.
Tor Browser: Ndị ọrụ gọọmentị, nkeonwe, na nke echedoro
Nke kachasị, Tor Browser abụghị naanị maka gam akporo, kamakwa, dịkwa maka sistemụ arụmọrụ desktọọpụ dị ka Windows, macOS na Linux.
Jiri Wi-Fi ọha
Ngwọta kachasị mfe ma ọ bụrụ na ịchọghị ime ka ndụ gị sie ike Izobe IP gị bụ iji njikọ Wi-Fi ọha. Ndị na -anya ụgbọ elu nke na -enye ụdị njikọ ọha a anaghị edekọ ngwaọrụ niile jikọtara.
Agbanyeghị, enwere ike ịhazi ụfọdụ ịchekwa mac (mpempe akwụkwọ ikike nke ngwaọrụ anyị abụghị njikọ) yana ụdị ngwaọrụ maka ebumnuche mgbakọ na mwepụ, ebe ọ bụ site na data a, ha enweghị ike soro ndị nwe ya.
Mac bụ sistemụ njirimara ịntanetị nke ngwaọrụ niile jikọtara na ịntanetị yana ọ bụ ihe pụrụ iche n'otu ngwaọrụ.
Ikwesighi iji ụdị njikọ ọha a nweta ihe ndekọ ego ụlọ akụ anyị site na ihe nchọgharịEbe ọ bụ na enyi onye ọzọ nwere ike jikọọ na otu netwọkụ nke na -enyocha ọrụ niile iji nakọta ozi na logins.
Ị nwere ike jikọọ na ọrụ ọ bụla na -enweghị nsogbu ọ bụrụhaala jiri ngwa dị maka ya, ebe ozi ezoro ezo site na ngwaọrụ gaa na sava ndị na -enye anyị ohere.
Emela mgbagwoju anya izo IP na ihe nchọgharị incognito
Ihe nchọgharị niile, opekata mpe nke a na -ejikarị, na -enye onye ọrụ ohere ịgagharị incognito ma ọ bụ na -amaghị aha dị ka ụfọdụ na -akọwa. Ka o sina dị, Ha apụtaghị na anyị nwere ike ịnyagharịa site na izo IP anyị, mana anyị agaghị ahapụ ihe nchọgharị ọ bụla na ihe nchọgharị.
Mgbe ị na -eji ọnọdụ nchọgharị nkeonwe, incognito ma ọ bụ ọnọdụ amaghị aha (dị ka onye nrụpụta wepụtara), a gaghị echekwa data na ihe nchọgharị, ya bụ, a gaghị echekwa akụkọ ihe nchọgharị na kuki a ga -ewepụ ihe nsuso ndị ọzọ ozugbo mgbe anyị mechiri taabụ.
Nhọrọ a bara uru maka mgbe anyị chọrọ jikọọ na ịntanetị site na ngwaọrụ na -abụghị nke anyị ịlele, dịka ọmụmaatụ, akaụntụ akụ anyị, nweta netwọkụ mmekọrịta anyị, gaa na ibe ọdịnaya ndị okenye ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Esi zoo IP na gam akporo